Wasiir saaxiib la ah Farmaajo oo lagu qashqashaadey Puntland | KEYDMEDIA ONLINE
Wasiir Jamaal ayaa maalmo kahor u tagey magaaladda uu kasoo jeedo ee Dhahar olole doorasho kursiga uu hadda ku fadhiya ee Gollaha Shacabka.
GAROWE, Soomaaliya - Wasiirka qorsheynta Xukuumadda Rooble Jamaal Maxamed Xasan ayaa Maanta laga hor istaagey inuu Ciidamo la galo magaaladda Garowe, ee xarunta Maamulka Puntland.
Degaanka Sin-u-Jiif ayay Ciidanka Puntland ku joojiyeen wasiirka, iyagoo ku wargeliyay inuusan Ciidan iyo Gaadiid dagaal toona la gali karin magaaladda oo uu doonayay inuu uga soo duulo Muqdisho.
Saddex maalin kahor ayuu Wasiirka Qorsheynta xaalad kacsan ka abuuray Garowe kadib markii Ciidan isaga u yimid inay galbiyaan iyo kuwa Puntland ay fooda is-dareen, taasoo lagu sigtay inay dagaal isku bedesho.
Wasiirka oo reer Sanaag ah, ayaa ku dhaw Farmaajo oo saaxiibo yihiin, waxaana uu dagaal siyaasadeed kala dhaxeeyaa Madaxweynaha Puntland Saciid C/llaahi Deni oo Villa Somalia ku kacsan.
Deni oo ah shaqsi aan dul-qaad lahayn ayaa aad uga caroodey qoraallo uu Jamaal bartiisa Twitter-ka dhawaan soo dhigay, oo uu ku eedeynayay Madaxweynaha inuu faragelin ku hayo doorashadda dalka.
Deni ayaa hadda isku dayaya inuu Jamaal ka reebo doorashadda, oo uusan markale soo noqon, inkastoo Wasiirka uu taageero ka heysto Beesha uu kasoo jeedo oo kamid ah kuwa saami-qeybsiga ku leh Puntland.
Deni ayaa la sheegay inuu yahay Musharax Madaxweynaha Soomaaliya, wuxuuna hadda ka shaqeynayaa sidii uu kusoo saaran lahaa Xidhibaanno u codeeya, iyadoo doorashadii Aqalka Sare ee ka dhacday Garowe ay kusoo baxeen xubno u badan Wasiiradda Maamulkiisa.